एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई नगरप्रमुख राणाको सहयोग Kasthamandap Daily
एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई नगरप्रमुख राणाको सहयोग
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज उप महानगर पालिकाका नगर प्रमुख डा. धवल शमशेर राणाले एक महिनाको तलवभत्ता एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहयोग गरेका छन ।
खजुरा गाउँपालिका ४ डी गाउँ निवासी प्रतिमा शर्मालाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि शुक्रबार डा. राणाले निवासमै पुगेर एक महिनाको तलब र भत्ता गरी ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका हुन । नगर प्रमुख राणाले प्रतिमाका बुवा
मदन ढुंगाना र आमा सीतादेवी शर्मालाई चेक हस्तान्त्रण गरेका थिए ।
१७ वर्षिया शर्माको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै राणाले आफनो तलव निरन्तर मानवीय सहायतामा खर्चीने बताए । पढाईमा जेहेन्दार प्रतिमाले त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट पूर्ण छात्रवृत्तिमा १५ सय जनालाई पछि पार्दै एमबीबीएसमा नाम निकाल्न सफल भएका हुन । शर्माको भर्ना शुल्क, पुस्तक, खाने, बस्ने गरी झण्डै १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
रकम हस्तान्त्रण कार्यक्रममा नेकपाका नेता रत्न खत्री, राप्रपाका नेता ऋषिराज देवकोटा, वडा अध्यक्ष तिलकविर सुनार, पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ का सचिव एवं उपमहानगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार शुक्रऋषि चौलागाई लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । आर्थिक रुपले कमजोर सो परिवारलाई यस अघि पनि विभिन्न दाताले सहयोग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र पार्टीले हटाउनु पर्दैन, म आफैँ हट्छुः मन्त्री खनाल